Hiran State - News: HS:-Barnaamijkii ay TFGdu ugu magac dartay qorshe howleedka (Road Map oo ay ku jahwareersan yahiin.
HS:-Barnaamijkii ay TFGdu ugu magac dartay qorshe howleedka (Road Map oo ay ku jahwareersan yahiin.
HS:-Barnaamijkii ay QM iyo TFGdu ugu magac dareen qorshe howleedka (Road Map) oo ay ku jahwareersan yahiin beesha caalamka kuna tilmaameen riwaayad la alifay laakinse aan la heyn goob lagu daawado, halka shacabka Somaliyeedna ku tilmaameen qandaraas ka mid ah kuwii ay qaar bulshada ka tirsan u keeni jireen shacabka mudadii colaadaha ka aloosanaayeen dalka.
Dowladahii shirkii Kampala Acord ka soo saaray qodobadii xukunka looga tuuray xukumadii Farmaajo qaarkood ayaa dhawr bilood kadib la yaaban waxa ay ka faa'ideen halkii sano ee TFGda loogu daray laguna bur buriyey xukumadii Farmaajo, halka qaarkood ay hada bilaabeen in waqtigii doorashada loogu talo galay laga soo hormariyo iyagoo quul dareynayo inba ay TFGda hada jirta wax la taaban karo qaban karto.
Warar aan si rasmi ah loo hubin ayaa sheegayo in doorashadii madaxweynaha iyo gudoonka baarlamanka ka soo hormareyso waqtigii la qiyaasayey iyadoona hada ay muuqato is fahmi waa ka tagan qorshahii Road Mapka Mahiga iyo shacabka Somaliyeed. war bixino horu dhac ah ayaa sheegayo in Mahiga uu dareensan yahay in arimahani Road Mapka aysan u wada dhameyn shacabka Somaliyeed oo uu dalka ku maamulayo fikirkii saaxiibkii ka horeyey uu ku maamuli jiray Somaliya Wallad Abdalla oo horey shacabka Somaliyeed oo taagan maalin cad ka dhadhiciyey dalka intaasi la eg inuu u baahan yahay 550 Mudane.
Hadaba Mahiga ayaa isaguna doonaya inuu dhacdo midaasi ka duwan kaka tago bulshada Somaliyeed xiliga u xilkaani hayo,isagoo TFGda ku mashquuliyey mashruuc loogu magac daray qorshe howleed iyadoo Bulshadii Somaliyeed laga dhigayo cawaan oo la yiri waxanu idiin jeexeeynaa amaba idiin siineynaa qorshe idiinku duwayo wadada saxda ah.
Hadaba marka la eego dhacdooyinkii taariikhda galay ee horey loogu sameyey shacabka Somaliyeed waxaanu ka xasuusanaa.
1- Qorshahii 4.5 ahaa ee lagu sharciyeeyey dalka Kenya 2004-kii
2- Qorshahii dal isaguba 21 sano oo colaad ah ku jiray shacabkiisuna yahay wax ka yar 15 Million oo la yiri baarlamaankiisu waxey noqonayaan 550 mudane.
3- Bada Somaliya oo la sumeeyo iyo iyadooba la iibsado Dominkii uu wadanku lahaa(SO) waxaasi oo dhan waanu ka nimid hada waxaanu mareynaa Qorshe howleed iyadoo dalka dhanba loo arko iney leeyahiin dad cawaan ah waxaana loo keenay waxa loogu yeeray Road Map.
Hadaanu wax yar qeexno Road Map waxaa u baahan qof ku safraya jid uusan garaneyn kadibna horey u sii qata Map u sahlaya goobtii uu u socday isagoona qofna weydiinin, mapkaasi oo laga iibsado goobaha ganacsiga wadamada ay nabadu ka jirto dhacdooyinkan iyo arimaha noocani ah xitaa laguma sameeyo wadamada ay dadkoodu yahiin qowmiyado kal aaf iyo diin ah iskaba daa wadan yar oo Somaliya oo kale ah.
Hadaba shirkii loogu magac daray Kampala Acord maxaa laga faa'idey koleyto bulshada Somaliyeed wali ma dareensana laakisne dowladahii hormuudka u ahaa qaarkood iyagii ayaa isweydiinayo ujeedada ay ka lahayeen bur burintii xukumadii Farmaajo.
Hadaba ma Mahiga ayaa qaldan mise hogaanka TFGda kuwii hore iyo kuwan danbe? hadii aanu jawaab fudud ka bixino xukumadii Farmaajo iyo kuwaniba wey qaldan yahiin waayo Xukumadii Farmaajana waxa laga waayey dalka sidii xiliga kumeel gaarka ah looga saari lahaa ku dadaala waxeyna xal u arkeen iney iska sii joogaan iyadoona hal mar siyaasadii ay wateen afka ciida loo daray. TFGda hada jirta iyadu ujeedadoodu awalba ma aheyn dal bad badin ee waxey aheyd diyaaradahan maalinkasta horey iyo gadaal loo raacayo oo booqashada lagu tagayo wadamada ay nabadeysteen shacabkooda iyo dowladahooda moodeen nolol waligeed jireysa iyagoo TFGdii xiligaasi jirtay u bur buriyey 1 sano oo dheeri ah armaad heshaan.
Hadaba halkii sano ee loogu daray iyadoon waliba la gaarin kala bar ayuu dalkii faraha ka baxay waxaana maanta ku sugan dhawr kun oo argagixiso ah iyo ku dhawaad 20 kun ciidamo African ah oo qaarkoodna jidka ku soo jiraan.
Waxaa waxaasi oo dhan ka sii daran labada Shariif midkoodba doorashada soo socota uguma furna jaanis kale oo horey ayey waqtigooda u soo qaateen oo wajiyo cusub ayaa soo socda. marka bulshada Somaliyeed ayaa laga doonayaa taariikhda ay ka qorayaan xiliyadii ay dalka isku bed bdeleen dowladaha kumeel gaarka ah oo qaarkood bilooyin kaliya iney shaqeeyaan loo dhisay.
· admin on November 27 2011 20:33:14 · 0 Comments · 1710 Reads ·
14,585,829 unique visits